Musharraxiinta oo maanta jeedinaya khudbadahooda maalintii labaad, Farmaajo & Deni – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Musharraxiinta oo maanta jeedinaya khudbadahooda maalintii labaad, Farmaajo & Deni
May 12, 2022 Xuseen 5
19 kamid ah Musharraxiinta Madaxweynaha DFS ayaa maanta jeedin doona khudbadahooda Musharraxnimo, oo ay uga hadli doonaan qorshayaashooda waxqabad. Waa maalintii labaad ee Hadal-jeedinta Musharraxiinta.
Madaxweyne Mohamed Abdullahi Farmaajo, Madaxweynayaashiii hore ee Soomaaliya Hassan Sheikh Mohamud & Sharif Sheikh Ahmed, iyo Madaxweynaha Puntland H.E Said Abdullahi Deni ayaa kamid ah Musharraxiinta maanta jeedin doona khudbadahooda.
Doorashada Madaxweynaha 10-aad ee JFS ayaa qabsoomi doonta 15-May, oo ku beegan axada. Waxaana ka socda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho olalaha doorashada oo Musharraxiintu ku kala jiidanayaan Xildhibaanada BJFS.
Xasan Sheekh kulahaa, haddii aan guulesto kama aarsan doono ciidanka iyo Shaqaalaha Rayidka ee Dowlada!!! Kkkk
Oo maxaay halleeyeen oo aarsiga meesha keenay?! Kkk
Xasan waa ninkii shirkada “Haas” 11ka Million ee Dollars ka siistay, xaruntii Jasiira ee Korontada Muqdisho!!
Kuwaas oo Haddeer ka dhisanaya, Wershad Caanaha sameeyso!!
Kulahaa, Aryaa mahan 100 sano ku shaqesyta!! Kkk
Ilaahow Xasan Xaraashe mar 2aad Soomaaliya ha ku soo celin, saa wuu xaraashayaaye!!!!!
Hassan Sheekh Allow ha nagu soo Celin Booli-Cunowga
XASAN SHEEKH MAXAMUUD kun jeer waxaa uu ka fiican yahay XAAR FARMAAJO… XAAR FARMAAJO waa in aan la aqbalin xataa hadii uu ku guulaysto madaxweynimada. XAAR FARMAAJO iyo FAHAD YAASIIN waa in maxkamad la soo saaraa.
XAAR FARMAAJO waddan dhan iyo sharcigiisa, iyo calankiisa, iyo dadkiisa ayuu kufsaday… sida uu u kafusaday SHUGRI CARAYS CIISE 1988.
DHILO futo xaar leh la wareegaysa… nacatullahi caleeek… nacaladii ILAAHEEY dusha kaa fuushay…
DHILO, QAXBAD, naga dhex bax…
Meeshii bugto iyo uurkaa is og! Kkk
Adigiyo Xaar iyo Futo yaa idiin Gar qaadaya?! Kkk